Raad Raac News Online – United oo ka adkaatay Man City
United oo ka adkaatay Man City
Faarax December 9, 2012 0
Kooxda kubbada cagta ee Man utd ayaa 3-2 uga adkaatay kooxda ay xafiiltamaan Man city,ka dib cayaar aad u xiisa badan oo galabta ku dhex-martay Garoonka Alitxaad ee kooxda Man City,waxaana ay labada kooxood ay soo bandhigeen cayaar wanaan ay jeclaysteen taagarayaashooda tooska u daawanayey & malaayiinta daafaha dunida ka daawanayey.
Bandhiga goolasha waxaa daah furay cayaarynka weyne Rooney ayaa qaybtii hor dhliyey laba gool,iyadoo labadaas gool ka dibna qaybte danme ee cayaarta ayaa Yaya Toure & Sbaleta ay soo gudeen labadaas da’daal dheer oo ay galeen.
Cayaarta markay barbaro noqotay,waxay koox kasta raadisay inay guusha hlkaasi kala tegto,weliba kooxda Man City oo garoonkeeda lagu cayaaray,dhamaadka cayaarta oo garsooruhu siidhiga u ku dhawaaqi rabo aya waxaa goolka guusha Man Unted dhilyey xiddigooda Robert V Persie,wuuxaan noqday halyayga kooxdaas.
Guusha Man Unt ayaa waxay saamaxysaa inay sii adkaysato hogaanka kubbada cagta ingiriiska oo ay xilligan hogaaminayso.
Cabdiqani Cabdullahi Irbad Falanqeeyaha Ciyaaraha